Oggannaan CIA Raashiyaan filannoo Ameerikaa kan jidduurratti xiyyeefachu dandeessi jedhan - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Mr Pompeo says he still sees Russia primarily as an adversary
Daareektarrii ejjansii Jiddugala Odeeffannoo (CIA) dhuma waggaa kanaatti Raashiyaan waldhakkeessa filannoo Ameerikaa irratti xiyyeefachu akka dendeeessu yaada.
Maayik Poompoo BBC'tti akka himanitti, yaalii Raashiyaa Awuroppaafi Ameerikaa jidduutti rakkoo uumuuf taasiftu irratti jijjiramni guddaan hinjiru.
Akkasumas Koriyaan Kaabaa dandeettii Ameerikaa misaa'eelaan rukutuu qabaachu malti ta'a jedhaniiru 'hafaan guutuudhaa.'
Haasni basaastoota Ameerikaa Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa kan bara 2016 keessatti harka qabaachuushee akka amanu dubateera.
Mr Poompoo pirezidaantichaaf ganamaan ibsa kan taasisan akka jedhanitti, komii pirezidaanti Donaald Tiraamp dhiheenya kanaas tufataniiru.
Mr Poompoon Pirezidaant Tiraamp jalatti waa'ee mul'ata isaanii CIA fii irratti sirriin kan hubataniidha.
''Nuti tajaajila bisaastummaa beekamaa addunyaatii,'' jechuun BBC'tti himaniiru.
Goodayyaa suuraa Donald Trump has been dogged by suspicion over his ties to Russian President Vladimir Putin
''Ummata Ameerikaa bakka bu'uun gadii baanee isaan hicciitii hatan irraati hojii keenyaa hojachuuf jirra. Kanaafuu akka hojii keenyatti deebiinuun barbaada.''
Mr Pompoo akka jedhanitti, hojii isaanii waggaa tokkootiin kaayyoon isaanii CIA cimsuufi bilisomsuudha.
Kunis ejjansii addunyaa waa'een boruu ishee hinbeekamne keessa hojatuudha. Addunyaanis lafa qorannoon basaastummaa tarkaanfii loltummaa qofaaf osoo hintaanee, waldiddaa siyaasaaf illeen bu'uura itti ta'u danda'uudha jedhaniiru.
Farra shoroorkessuummaa irratti waliin hojachuun kan jiraatu ta'ulleen (bara darbee karora St Peetarsbuurgi keessa ture fashalleessu rratti CIA gargaaree ture), ammalleen Raashiyaa akka diina jalqabaatti akka ilaalan dubbataniiru Mr Poompoon. ''Gocha isaanitiif jijjiramaa guddaa hin argiine,''jedhaniiru.
Yaaddoo isaanii kunis filannoo Ameerikaa waldhakkaa isa Sadaasa dhufuu yoo ta'ee gaafatamanii, : ''Akka yaalaniifi jiddu galuuf hojatan eeyyeen nana shakka, garuu Ameerikaan akka filannoo bilisaafi haqa qabeessa gaggeessitu nan beeka. Akka dhiibbaan isaan qabaatan filannoo keenya irratti miidhaa olaanaa akka hinqabaannee taasisuufis ni hojjanna jedhaniiru.
Goodayyaa suuraa Mr Pompeo says his mission has been to unleash and unburden the CIA
Mr Poompo Ameerikaan gocha jiddu galiinsa Raashiyaa irratti hojachuuf yaalaa jirti. Hojiiwwan kanneen keessaa muraasins gahee CIA miti, fakkeenyaaf hojiiwwan akka namoonni maddawwan odeeffannoo adda baasaniif gargaaru fa'i.
Garuu hawaasni basaastummaa gocha jiddu galiinsaa keessatti eenyu akka hirmaate adda baasuu keessatti qooda fudhateera. Kunis Raashiyaa adda baasuuf malawwan tekinikaatti gargaaramuun kan raawwatame ture.
Haa ta'u malee Mr Tiraamp jecha hawaasa basaastumaa biyyaattii Raashiyaan filannoo keessaa harka qabdi jedhuu ni haalu. Kanaafuu Daarektarri CIA daandii sirriitti deebii'u qabaatuu laataa?
''Ani kanan hojadhuu waa'ee daandiif osoo hintaanee kanan hojadhu dhugaadhafi,'' jechuundeebii keennu. ''Guyyaa guyyaan waa'ee dhugaa CIA irraa hubannee pirezidaantichaaf kennaa turreejira.''
Mr Poompoon wayita lamaanuu Waashington DC turanitti guyyoota hunda ibsa kennaniifii jiru. Ibsichis taateewwan ammaafi dhimmoota tarsiimoowwan kan haguugee ture.